प्रभु लाइफको बीमा शुल्क आर्जनमा ११० प्रतिशतको वृद्धि , कस्तो आयो दोश्रो त्रैमास ? – Insurance Khabar
प्रभु लाइफको बीमा शुल्क आर्जनमा ११० प्रतिशतको वृद्धि , कस्तो आयो दोश्रो त्रैमास ?
प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७६, मंगलवार १०:३१
काठमान्डौ: प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालु आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को दोश्रो त्रैमासमा कुल बीमाशुल्क आर्जन ११० प्रतिशतले बढेको छ । चालु आवको दोश्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले ३१ करोड २६ लाख कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क गरेको थियो ।
कम्पनीको जगेडा कोष १२४ प्रतिशतले वृद्धि भएर १४ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीको जगेडा कोषमा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको जीवन बीमा कोष भने १९८ प्रतिशतले बढेर ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुमा जीवन बीमा कोषको ठुलो महत्तो हुन्छ।
कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमास सम्म ३ करोड ५८ लाख खुद मुनाफा गरेको छ। यद्यपि, जीवन बीमा कम्पनीहरुको हकमा भने एक्चुअरी मुल्यांकन हुन बाँकी भएकाले खुद नाफा र प्रति शेयर आम्दानी एक्चुअरी मुल्यांकन पश्चात मात्र वास्तविक आउने छ ।